VaTsvangirai Voedza Kugadzirisa Makakatanwa Ari Mubato
Mbudzi 01, 2007
Mutungamiri weMDC VaMorgan Tsvangirai vange vari muBulawayo vachiedza kugadzirisa makakatanwa ari mubato ravo, ayo akonzwerwa nekunetsana panyaya yeWomens Assembly. Zvinonzi vanhu vemuBulawayo vaudza VaTsvangirai kuti havasi kufara nedivi ravari kunzi vari kutora, panyaya yemadzimai aya.
Ukuwo, musangano wenational executive yebato iri neMugovera unenge uchakonzera makakatanwa akaipa, kana hutungamiri hwebato iri hukatadza kugadzirisa gakava riripo panyaya yeWomen’s Assembly iyi.
Mashoko atatambira ati VaTsvangirai vanonzi vanofanirwa kuratidza kuti mutungamiri ane njere uye anotevedza bumbiro remitemo yebato iri.
Vamwe vanhu vatiwo nyaya huru iripo haisi yemadzimai chete, asi kuti inyaya yekuedza kudzama kwepfungwa dzevatungamiri veMDC, zvichitevera mutongo wakapihwa naVaYunus Omerjee wokuti extra ordinary congress ye Women’s Assembly inogona kuenderera mberi, ndokana gungano iri razeya pamwe nekuwirirana gwara rekutora zvichitevera kubviswa kwehutungamiri hweWomen’s Assembly, ne Standing Committee.
Asi Amai Lucia Matibenga vati ndivo sachigaro weWomen’s Assembly, kunyange hazvo vakafanobata chigaro chasachigaro webato iri, VaLovemore Moyo, vachiti Women’s Assembly yava kutungamirirwa naAmai Theresa Makone, mudzimai waVaIan Makone, munyori anoona nezve sarudzo mubato iri.
Chris Gande weStudio 7 abata Amai Matibenga, kuti tinzwe pane pfungwa dzavo.
Asi imwe nhengo yeNational Executive Council yeMDC yati inoona musangano uchaitwa nebato iri neMugovera uchifamba zvakanaka pakugadzirisa makakatanwa ari mubato iri.
Munyori wezvegwara remusangano muMDC, Amai Sekai Holland, vati ivo havasi kukwanisa kupinda mumusangano uyu, asi vanoona sekunge iyi ndiyo nguva yekuti varume nevakadzi vachapinda musangano uyu vazeye nekuvaka pose panoonekwa sepasekesa mubato.
Vaudza Jonga Kandemiiri weStudio7 kuti panyaya yeWomen’s Assembly, ongororo yakaitwa nemunyori anoona nezvemukati menyika mubato iri, VaSam Siphepha Nkomo, inofanirwa kuburitswa pachena yoonekwa nemunhu wese.